imagi ebekiwe Abakhiqizi | I-china mug setha abahlinzeki nefektri
Umgudu weswidi othunjiwe, i-400ml mug bone china.
Umugi we-china china omuhle onejuzi elukiwe elihambisana nomug, ijezi elithungiwe lingaba yimuphi umbala nokwakheka. Ilungele isizini yonke, ikakhulukazi isizini yokuwa neyasebusika. Umug uphethe u-400ml (wamanzi wemug ogcwele). Kubanzi ngokwanele ukuphuza noma itiye lakho lansuku zonke njll. IBHOLA ELIKHULU LESITOLO: Umugwana wenziwe nge-premium ephezulu evunyelwe i-bone china yokuphepha nokuthula kwengqondo, i-LEAD-FREE, NON-TOXIC, ukumelana ne-chip futhi iqine kakhulu. ESEBENZA NOKUVUMELEKILE: Ngesibambi semug esimnandi, esikhulu ...
Umumo we-Glaze mug T ngokuhlobisa phansi kobumba, i-400ml yemigqa yombala wesitayela sombala we-glaze, ukuphela kwangaphandle komugqa nangokuphela kokucwebezela ngaphakathi. Ngengxenye encane engezansi ngokuhlobisa umbala ohlukile wobumba.
I-450ML Glaze mug enomklamo
Umbala we-glaze glaze owenziwe ngosilika, i-450ml mug enezinhlobonhlobo zombala glaze, imibala emibili ehlukile ngaphandle komug.
MUG NGESIMBOZO SOGOQO
Imug eqondile ene-bamboo noma isivalo sokhuni I-bone entsha ye-china, i-china enhle, i-400ml mug enesiqalo se-bamboo, i-mug ngaphandle kombala we-glaze nedizayini, ingafana nesipuni, i-Pattern Design (Iqoqo le-6 noma le-4) IBHONI ELITSHA CHINA MUG SET KUFAKA: Isethi ye Izinkomishi ezi-4 noma ezi-6 ezinesivalo soqalo, imagi iphethe u-400ml (ukuthola amanzi emug egcwele) Kukhulu ngokwanele ukuphuza noma itiye lakho lansuku zonke njll. IBANGA ELISHA IBHOLA ELISHA CHINA: Umug wenziwe ngethambo elisha eligunyaziwe le-bone china ukuphepha kwakho nokuthula kwengqondo, UKUHOLA-MAHHALA, OKUNGABI BUTHO, i-chip-r ...
UKWAKHIWA KWEZILWANE UMUGS
Mug wezilwane, hlanganisa uphinde uhambisane nezinto ezahlukahlukene nokwakheka kwama-mugs, njengemigudu emifushane emikhulu engu-V enesibambo sombala we-glaze ku-stoneware, njengamagobisi aqondile angamathambo e-china noma i-stoneware anombala we-glaze. Ingathathwa njengesethi yedina, isethi yetiye. Izinto zesipho, umug wokusebenzisa nsuku zonke
Ama-mugs ahlukahlukene anomumo ngamunye womug wokumelana nokuklanywa komdlalo, Elegant valentine design nge-12oz bullet mug ku-bone china / new bone china. Ukwakhiwa kwezinhlamvu zokubingelela zomkhosi noma usuku lokuzalwa nge-12oz bullet mug ku-bone china noma i-bone china china. Idizayini ekhethekile ehlangene ehlangene ye-9oz zsfk mug njll
Uchungechunge lwengadi yezwe
Imug enezimpondo, ithambo elisha le-china mug, ithambo elihle le-china mug, lingabhekwa njengesethi yedina, isethi yetiye, imbali enovemvane, inyoni njll iqembu lengadi yezwe. Izinto zesipho, umug wokusebenzisa nsuku zonke
IN-GLAZE Hlobisa IZILWANE ZOKWAKHA IZILWANE
T Shape mug, imagi yesikhunta kabili, i-bone china china entsha ekwakhiweni kwesilwane se-glaze, ingathathwa njengesethi yedina, isethi yetiye, inyamazane yezilwane, indlovu, idube, impungushe, ingwe, njll. Izinto zesipho, umug wokusebenzisa nsuku zonke